Ny mampiavaka ny famolavolana sary tamin'ny taona 90 | Famoronana an-tserasera
Tamin'ny taona 90 dia hitantsika ny fanelingelenana ny famolavolana sary miaraka amin'izany Adobe Photoshop sy programa hafa izay nanomboka namolavola ny sarin'ny marika, vokatra ary serivisy maro. Fitaovana vaovao niely nanerana ny planeta raha toa ka nisy mpikaroka nizaha azy ireo hamerina ny valiny izay tamin'ny alàlan'ny fomban-drazana indrindra dia tena sarotra azo.
Ny famirapiratana, ny loko tsy mitovy ary ny lohahevitra sasany dia nitantara izany filentehan'ny tropikaly mahatalanjona na ilay calligraphy sarotra izay azon'ny solosaina atao ny mamerina haingana dia haingana. Betsaka ny ohatra amin'ny karazana marika rehetra izay nampiasa ny endrika sary tsy maintsy ampiasaina amin'ny solosaina hampiorina ny fototr'izay tafiditra ao anaty ankehitriny.
Ny ankabeazan'ny famolavolana ny 90 dia avy amin'ny fahatapahan'ny programa famolavolana nomerika sy mpamolavola mianatra ny karazana vokatra rehetra azon'izy ireo natao tamin'izy ireo izay sarotra kokoa ny mamerina amin'ny tànany.
Ka tamin'izany taona izany dia nahita karazana isan-karazany isika lamina marevaka somary sarotra izy ireo ny nanintona tamin'ny tanana ary nandany fotoana kely kokoa hanaovana machine. Io koa no fotoana nahazoana aingam-panahy ho an'ny lohahevitra mifandraika amin'ny zavakanto Afrikana sy ambanin'i Sahara izay hitanay tamin'ny marika fitafiana toa an'i Rip Curl sy ny maro hafa.
Ao anatin'ny tontolon'ny famolavolana izay saika miova ny zava-drehetra nefa tsy afaka mijoro ho vavolombelona amin'izany Noho ny "democratization" an'ny Internet, izay mamela loharanom-panentanam-panahy hipoitra avy amin'ny toerana rehetra eran'izao tontolo izao, ireo orinasa lehibe no mametraka ny hafainganam-pandehany amin'ireo rafitra miasa izay afaka manaraka ny karazana endrika rehetra endrika fanamafisana marika.
Folo taona nijoroan'ny Internet hahatratra ny taonjato ankehitriny hiditra tanteraka amin'ny fiainantsika ary ho ampahany voajanaharin'ny rafitra.
ny Rano kasety nanana endrika manokana izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Aingam-panahy avy amin'ny lohahevitra famolavolana sary '90